Taona Iray Hafa Ho An’ny Feminista Manohitra Fahefana ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2018 8:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Português, Italiano, English
“Te-hiaina izahay” Sary avy ao amin'ny Emergente. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Fanamarihana: ny Feminisma dia fitambaran'ireo hetsika politikam filozofika ary sosialy mifampizara tanjona iombonana ho famaritana, fametrahana ary fanatratrarana ny fitoviana ara-toekarena, politika, koltoraly sy isam-batanolona, manoloana ny rafitry ny lalàna sy ny sosialy ho an'ny lahy sy ny vavy. Hetsika mikendry ny handrava ireo tsindry hazolena manjo ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra.
2017, taona iray hafa ho an'ny isa manaitra ary taona iray hafa nanoheran'ny vehivavy ny 2017. Taona izay nanandratan'i Amerika Latina ny feony hanoherana ny herisetra eo amin'ny fananahana niaraka tamin'ireo hetsika feminista izay nirefotra ka nihitatra eraky ny faritra, nahaforona tetezana ho eny amin'ireo hetsi-behivavy hafa erantany.
Ireny hetsika erantany ireny dia nanakoako nanerana ny tany ary neken'ny fampahalambaovao mahazatra: nisafidy ny teny “feminisma” ho tenin'ny taona ny Rakibolana Anglisy Merriam Webster ary ny gazetiboky Amerikàna Time nisafidy ny hetsika #IzahoKoa, izay nizaran'ny vehivavy aman'arivony ny tantarany manokana momba ny fanafihana ara-nofo, ho toy ny Olon'ny Taona.
Nanaraka hetsika betsaka izay nandona an'i Amerika Latina ny Global Voices, ary satria mifarana ny taona, tianay hiverenana jerena ireo fotoana nahatongavan'ny tolom-behivavy ho teny afovoan'ny sehatra.
“Ny herinandron'iny ihany izay nahitana an'i Amerika Latina nidina teny an'arabe sy tao amin'ny aterineto mba hiaro ny zon'ny vehivavy, nitabataba ny vahoaka tao amin'ny faritra noho ny fahafatesan'ilay vehivavy 41 tao anaty toeram-pialofana teny amin'ny sisin'ny tanànan'i Goatemalà.” Sary: Carlos Sebastián ho an'ny gazety an-tserasera Nómada. Nampiasàna ny lisansa Creative Commons – tsy voasokajy .
Volana nampalaelo ny Martsa ho an'i Goatemalà. Volana nahitana zazavavy 41 maty tao anaty afo tao anaty toeram-pialofnaa iray tantanin'ny fanjakana teny ambanivohitry ny tanànan'i Goatemalà, tranga izay niteraka fandraisana an-tanana maromaro avy amin'ireo vondrona sivily. Indrindra fa nitondra ho amin'ny hetsika manerantany #56Hurt (#NosDuelen56) ilay tranga. Nampiray hina vondrona mpanakanto iraisampirenena izay nanamboatra sarin‘ireo zazavavy tsirairay maty tao amin'ilay haintrano ilay fandraisana an-tanana, nitakiana ny hihetsehan'ireo manampahefana ao Goatemalà.
Indira Jarisa Pelicó Orellana, iray tamin'ireo niharan-doza tamin'ny fandripahana “Hogar Seguro”, 17 taona tamin'izy maty. Sary nataon'ilay Meksikàna mpanakanto, Claudio Navaroo. Fampiasàna nahazoana alalana.
Tomany ho an'ny rariny amin'ny alalan'ny kanto, fanaovana gazety, fikatrohana anaty aterineto ary feminisma ny #NosDuelen56. Fanazàrana ny fahatsiarovana iombonana ho an'ny fahamendrehan'ireo vehivavy 56 izay voahidy ary voadoro tao anatin'ilay trano fialofana tantanin'ny fanjakàna ao Goatemalà tamin'ny 8 Martsa tamin'ity taona ity . Tamin'ireo zazavavy ireo, 41 no maty vokatr'ity famonoana atosiky ny fankahalàna vehivavy ity ary 15 no naratra mafy.
Tamin'ny Jolay, nanao dingana lehibe ny hetsika tsy miankina iray ho an'ny tahirinkevitra misokatra izay miezaka ny mametraka an-tsarintany famonoana natosiky ny fankahalàna tvehivavy ao Mexico (MFM amin'ny Espaniola). Omen'ilay sarintany ny fangitra jeografika sy ny an'ireo velarantany ara-jeografika sy toe-javatra nanodidina ireny famonoana vehivavy izay niseho nanomboka 2016 ireny. Tamin'ny faran'ny 2017, tranga 1.824 no voarakitr'ilay sarintany.
Tamin'ny Aogositra, nampiseho ny hasarotana sy ny herin'ny aterineto ny hetsika iray nanaraka mpianatra anankiray avy ao amin'ny Sekoly fianarana ho mpitsabo ao amin'ny Oniversiten'ny Asuncion ao Paragoay izay mahatonga ny asan'ireo vehivavy mpianatra ho mpitsabo ho mety hidiran-doza.
Tamin'ny Septambra, nanaitra ny faritra manontolo ny famonoana an'i Mara Castilla nataon'ny mpamily Cabify. Nanaitra hetsi-panoherana eraky ny fanjakana iraika ambinifolo ao Mexico ilay famonoana an'i Castilla, miaraka amin'ireo mpanohitra manakiana ny Fanjakana noho ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ary ny tsimatimanota manjaka mitondra herisetra manjo ny vehivavy. Amin'io fotoana io ihany, marobe ireo tenifototra ety anaty aterineto mampifandray ny fahafatesany amin'ireo tranga herisetra ara-pananahana tany aloha (indrindra fa ny hetsika #RahaVonoinyAho) nangataka fiarovana ho an'ny vehivavy ary fampitsaharana ny fanomezantsiny ety anaty aterineto atao an'ireo niharan-doza.
Manokatra toerana, mamaly bontana:
Niakatra an-tsehatra ny Miss Peroa tamin'ity taona ity nisarika ny fijery ho any amin'ny isa manaitra amin'ireo tranga herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny firenena. Nanaitra ny mpampahalala vaovao manerantany ilay hetsika, nefa nanisy dikany hafa haingana an'ilay tantara ny Perovianina mpampiasa aterineto. Ho an'ny ankamaroany, ilay fifaninanana mihitsy no tafiditra anaty rafitra sarotra izay manao ny vehivavy ho toy ny zavatra fa tsy olona.
Pikantsary avy amin'i Al Jazeera: “Mpifaninana Miss Peroa nanova ny fifaninanana ho fanoherana ny herisetra ara-pananahana.” Afaka hita eo amin'ny Youtube
Voalohany, tokony ekentsika ny toe-javatra. Miss Peroa 2017. Fifaninanana hatsaran-tarehy izay mifidy ny mpandresiny miainga amin'ny fijerina ny bikany ivelany ary ny fahaizany mamaly fanontaniana ao anaty fotoana voafetra. [Fifaninanana izay] hitovian'ny vehivavy rehetra: lava, manify […] Peroa. Ny firenena fahadimy eto an-tany mampidi-doza indrindra ho an'ny vehivavy. Mifandray ireo zavatra roa ireo. Vokatry ny fiarahamonina mpanavaka fananahana. Karazana herisetra ny fanaovana ny vehivavy ho toy ny zavatra izay nipoitra avy amin'ny fiaramonina tsy manome lanja ho anay afa-tsy amin'ny alàlan'ny vatanay ary mihevi-tena fa afaka manao izay tiany aminy izy ireo.
Raha tena niraharaha ny hatsaram-piainan'ireo vehivavy Perovianina ireo ny Latina.pe [Fahitalavitra mampita an'ilay fifaninanana] sy ny Miss Peroa ary nitady ny hitondra fiovana goavana ao anatin'ny fiarahamonintsika izay mpanavaka ara-pananahana sy mahery setra, afaka ampiasain'izy ireo ilay fotoana fampitàna amin'ny onja ho an'ny zavatra ilaina kokoa noho ny fahazoana mpanjakavavin'ny “hatsaran-tarehy” iray hafa (mpanjakavavy miaraka amin'ny hatsaran-batana iray voafaritra manokana: avy any amin'ny Tandrefana, tsy maneho ny ankamaroan'ny vehivavy Peroviana). Tsy manipy voninkazo an'ireo mpifaninana aho satria efa hitan'izy ireo fa miaritra toe-javatra henjana ny vehivavy Peroviana. Tsy miteny izahay hoe “Mamono anay izy ireo” na #FirenenIreoMpanolanaPeroa satria tinay io. Maharary. Be mihitsy. Mahakivy. Mankarary ny fanahinay saingy mikikiaka azy no ataonay satria izay no marina ary tsy afaka ny tsy hijery izay iainanay izahay.
Nampangain'ireo hetsika ara-javakanto hafa ireo fanararaotana, tahaka ireo andian-tsary izay nanakiana ireo tobim-pahasalamana tsy ara-dalàna natao hanitsiana an'ireo vehivavy mitia vehivavy ao Ekoatora, mandritra izay, tetikasa hafa nanindrahindra ny fandraisana anjara an'ireo mpahay siansa vehivavy Latina Amerikanina. Amin'izany fotoana izany koa, nosokafan'ireny hetsika ireny ny toerana ho an'ny fifampiresahana (eo amin'ny aterineto sy ivelany) momba ny fihaonan'ny firazanana sy ny miralenta ary ny filàna ho an'ireo resaka sarotra momba ny fanavakavahana any anaty hetsika ho an'ny fitoviana:
Izao indrindra, fotoana ho antsika vehivavy mainty hamaritana ny tenantsika amin'ny tenintsika ihany, ary hivoriana anaty toerana noforonintsika ho antsika […]. Misy an'ireo feminista fotsy/ hiarahamonina hitomany fisarahana sy fanavakavahana rehefa avy mamaky an'ito, saingy ampiasao ity fahafahana ity mba hampianarana ny tenanao momba ny fihatsarambelatsihy sy ny fifanoherana ao amin'ny hetsika feminista raha vao vehivavy mainty no jerena.
Amin'ny ankapobeny, mbola mitohy ny tolona ary mihamafy ny fiarahamonina miady ho an'io antony io. Sady mitohy mahazo bahana ihany ireo hetsiky ny vehivavy ao amin'ny faritra, andrandraina ny 2018 ho taona hahitàna ny fitomboan'ny tetikasa maro izay manosika ho amin'ny fiovana ifotony any anatin'ny fiarahamonina ary hiaro ny tontolo iray azo antoka sy rariny kokoa ho an'ny vehivavy rehetra .